‘संविधान निर्माणको मुख्य बाधक एमाओवादी’ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
‘संविधान निर्माणको मुख्य बाधक एमाओवादी’
सुनवल । सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा मिनेन्द्र रिजालले एकीकृत नेकपा माओवादी संविधान निर्माणको मुख्य बाधक भएको आरोप लगाएका छन् । एकीकृत माओवादीले चुनावी घोषणापत्रमा आफैँले प्रतिबद्धता जनाएको कुरा पालना गर्न आलटाल गरिरहेकाले संविधान निर्माण कार्य अन्योलमा परेको डा. रिजालले बताए ।
सामुदायिक रेडियो सुनवलको शनिबार सुनवलमा उद्घाटन गर्दै नेपाल मन्त्री रिजालले संविधान निर्माणको लागि संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले समेत ईच्छा नदेखाएको कारण संविधान निर्माण ओझेलमा परेको जिकिर गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेस र खासगरी वर्तमान सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले कुनै पनि हालतमा माघ ८ मै संविधान निर्माणको पक्षमा रहेकाले सरकार बाहिर रहेका मधेशी दलहरुलाई समेत सरकारमा आउन मन्त्री रिजालले आग्रह गरे । सहमतिको आधारमा संविधान निर्माणको लागि अब समय अपुग भएको भन्दै उनले दुई तिहाई बहुमतको आधारमा संविधान निर्माणको लागि दलहरुले खुट्टा कमाउन नहुने बताए ।
मन्त्री रिजालले नेपालका सञ्चारमाध्यमहरु परिवर्तनका सम्वाहक भएकाले सही र सत्य समाचार प्रशारण प्रकाशन गर्न आग्रह गरे । समुदायमा स्थापना हुने सामुदायिक रेडियोहरु समुदायको हितका लागि काम गर्न अग्रसर हुनुपर्ने समेत उनले बताए । मन्त्री रिजालले राष्ट्र संविधान निर्माणको संघारमा रहेकाले सोको लागि दबाब सिर्जना गर्न मिडियाहरु अग्रसर हुुनुपर्नेमा जोड दिए ।